धनकुटा । जिल्ला अदालत धनकुटाले १३ वर्षीय बालिकालाई ललाई फकाई पटकपटक यौन शोषण गर्दै आएका ४ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा राखे आदेश दिएको छ । उनीहरुलाई जेठ २९ गते जिल्ला अदालत धनकुटाका न्यायाधीश फणिन्द्र पराजुलीको एकल इजलासले पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
धनकुटा नगरपालिका ६ आत्माराकी १३ वर्षीया बालिकालाई लामो समयदेखि पटकपटक यौन शोषण गर्दै आएका शिक्षक मदन अधिकारी, धनकुटा नगरपालिका वडा नंं. ६ का गौरी अत्री, देवेन्द्र श्रेष्ठ र भक्तबहादुर मगरलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
चारै जनाले सामूहिक रूपमा बलात्कार गरेको नभई छट्टाछुट्टै यौन शोषण गरेकाले मुद्दा पनि अलग–अलग नै दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
चार जनाले धनकुटा वडा नं. ६ कै १३ वर्षीया बालिकालाई लामो समयदेखि यौन शोषण गर्दै आएका थिए । उनको स्वास्थ्य जाँच गर्दा ६ महिनाको गर्भ रहेको रिपोर्ट आएको छ । बालिकालाई अहिले पुनर्स्थापना केन्द्र धनकुटामा राखिएको छ भने प्रहरीले चारै जनालाई जबर्जस्ती करणी महलअन्तर्गत कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाइएकामध्ये मदन अधिकारी धनकुटा ६ स्थित माथिल्लो गोकुण्डेश्वर माविमा शिक्षक हुन् । उनी नेकपाको प्रचार विभाग धनकुटाका सहसंयोजक थिए । उनलाई नेकपा धनकुटाले साधारण सदस्यतासमेत नरहनेगरी कारवाही गरिसकेको छ ।
उनले बालिकाका बुवाले किटानी जाहेरी दिएपछि फरार भएका थिए । तीन जना पक्राउ परेपछि अधिकारीले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफुलाई फसाउन खोजिएको बताएका थिए । उनले विज्ञप्ती जारी गरेपछि मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्नगल प्रचार गर्न थालेपछि भारतीय च्यानल प्रशारणमा लाग्यो रोक
काठमाडौं । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपाल र नेपाली विरुद्ध कुप्रचार गर्न थालेपछि देशभर त्यसको विर...